သက်ဝေ: ဗန်ဂိုး ဂေါ်ဂင်နဲ့ စာပို့သမားတစ်ယောက်
Posted by သက်ဝေ at 4:33 PM
maylay May 20, 2016 at 7:53 PM
ပြောချင်တာတွေ ပြောရင် နားထောင်ပေးမယ့် အင်တာနက် နားတွေ အများကြီးရှိ :) ဆရာမသာ ပြောသာပြောပါလေ(ရေးသာရေးပါလေ) ။ စာပို့သမား လက်ထဲ ပါသွားဖူးတဲ့ နားလေး ငိုမဲ့မဲ့ ဖြစ်နေမှာနော်။
Ma Tint May 20, 2016 at 8:41 PM
အိမ်မှာလည်း ဘဲလ်တီးလုံးရှည်သံမကြိုက်လို့ ဘုရားကခေါင်းလောင်းလေးပဲ အသုံးပြုထားတယ်။
ဒီမှာမို့ထင်ပါရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်တပ်ထားတဲ့ ခေါင်းလောင်းလေး နှစ်တွေတောင်ကြာပေါ့။
ခေါင်းလောင်းသံလေးကြားတိုင်း တံခါးခေါက်သံကိုပါသတိယပြီး နားရွက်လေးတွေကိုတွေးမိတော့မှာ အသေအချာ။
Thandar Lwin May 20, 2016 at 10:56 PM
မနက်အလုပ်သွားခါနီး နားထဲက နားကပ်ကို နောက် နားကပ်တစ်ခုနဲ့ အလဲအလှယ် လုပ်တဲ့ အချိန်
အမသက်ပြောချင်ရာပြော အဲဒီစကားစုလေးပဲ စိတ်ထဲစွဲသွားတယ်
eint chu May 24, 2016 at 12:22 AM
Thank you featuring my blog. but my blog has been updated to http://www.aburmeseabroad.com/
I would be grateful if you update it too. Nice read here though. XXX